Mahwendefa ese anogadzirwa muLIFAN yekuchenesa chivakwa kuona mamorekuru giredhi mhando. Yedu yakakura mapolypropylene mahwendefa inopa mhinduro dzakanaka dzemuenzaniso wekuchengetedza uye assay set-up, ichibvumira dilution uye aliquots kubatwa, kuchengetwa kana kutakurwa zviri nyore. Mahwendefa ese ANSI fomati yekuenderana nema automated masystem.
Robotic matipi aHamilton
Matipi eRobotic eTecan (Teken)
Yakadzika yekuchengetedza pipette matipi
Product zita: Yakadzika yekuchengetedza pipette matipi / yakadzika yekumhanyisa pipette matipi
LIFAN Akadzika ekuchengetedza pipette matipi anogadzirwa kubva super yakajeka yepamusoro mhando Polypropylene. Idzo nzvimbo dzemazano dzinogadzirwa kuburikidza neakakosha maitiro. Maitiro aya anoita kuti tip yemukati mepasi ive super hydrophobic, nekudaro zvinonyanya kudzora kurasikirwa kwemuenzaniso uye inopa zvakanyanya kuwedzera kubereka kana uchishanda neyakaomesesa midhiya.
Chigadzirwa zita: Universal Pipette Matipi
LIFAN Yese Pipette Matipi anogadzirwa kubva super yakajeka yepamusoro mhando Polypropylene. Pipette Micro Matipi akanaka emhando zvigadzirwa zvigadzirwa zve micropipettor.
PCR Membrane ye96 / 384 PCR ndiro, muti weplate zvakanaka PCR Membrane, ye96 / 384 PCR ndiro, muti weplate, wakajeka mataiti zana pabhegi, mabhegi mashanu pachiitiko Chimwe Chinhu: * Chinyorwa: Super mhando PET epurasitiki * Kushandisa: Yakashandiswa fungus, mabhakitiriya uye microorganism tsika. * Inogona kuunganidzwa kumusoro kuti ichengetedze iyo nzvimbo uye yakanaka kune yezvirwere nzvimbo. * Kugarisana kwakanaka, kunoenderana kune mazhinji emachina. * EO chena kana isina chena * Yakarongedzwa mukuvhara mapepa-epurasitiki bhegi kana bhegi repurasitiki kudzivirira hutachiona. * Availa ...
96 tsime 200ul pcr ndiro
384 tsime 40ul pcr ndiro
PCR zvigadzirwa zvinogadzirwa, kubva kune prime mhandara, polypropylenes. Izvi zvinoguma mumachubhu, mitsetse uye, matipi anoratidza chiyero chakakwana pakati pekujeka, kupfava, kusimba, antistatic maitiro uye gasi kuomarara.
Kutonhodza Vials ndiyo yako yakanyanya kunaka sarudzo kune iyo yepamusoro mhando uye yakakosha maficha. * Yakagadzirwa kubva inogara yakasimba PP uye PE * Inowanikwa nemavhoriyamu mana: 0.5ml, 1.5ml, 2.0ml uye 5.0ml * Inopindirana cap dhizaini inonyatsoita kukwana kwayo uye haizopinze mvura kana kumwe kusvibiswa. yekurekodha zviri nyore * Kuvhara iine silicone gasket kunogona kudzivirira kuyerera kwemvura * Screw cap yeumwe-ruoko oparesheni * Tembiricha renji: -196 ℃ -121 ℃ * Nyore-ku ...
ICentrifuge Tubes inogadzirwa nepolypropylene (PP), yakajeka polima zvinhu, iyo inoshandiswa zvakanyanya mu molecular biology, kliniki kemesitiri uye biochemistry research.